ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအပေါ်အလိုအလျောက်တန်ပြန်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည့်သဘောထားငါးခု - သင်၏ Brain On Porn
သူတို့ကိုငါခေါ်သတိထားမိ သဘောထားများ. ဒါအကြံပေးချက်များမဟုတ်ပါ သူတို့ဟာအချက်အလက်တွေ၊ သင်အမှန်တကယ်မယုံကြည်ပါက၎င်းတို့သည်အသုံးမဝင်ပါ။ ဤသဘောထားတစ်ခုခုကိုသင်သဘောမတူပါက fap ကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါလာခဲ့တယ် / r / nofap ငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်၏။ အကြောင်းမူကား, ငါ PMO ရှောင်ငါ၏အပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ ငါ 90 ရက်ပေါင်းမရောက်နိုင်ဘူး, ငါနေဆဲ FAP ။ သို့သော်လည်းငါသည် ကိုပြု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်စည်းကမ်းဆည်းပူး, ငါ ကိုပြု လုံးဝငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြcompletelyနာများကိုဖြေရှင်းတက်အဆုံးသတ်။ မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုကူညီနိုင်သမျှကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမှာငါတကယ်ယုံကြည်လာတဲ့အရာအချို့ရှိတယ်။
1. Fapping မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။
အလွန်အကျွံ fapping ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်အကျွံ fapping ဖို့အားလုံးကိုအားနည်းချက်တွေသိကြပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုယ်နှိုက်က fapping ဝေးမာရ်နတ်ဖြစ်ခြင်းကနေကြောင်းသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ရုံတစ်ချိန်ကစဉ်အတွက်လုံးဝကျန်းမာကြောင်းသတိရ! တကယ်ပဲ!
၂။ သင်ရှုံးနိမ့်တဲ့အခါဘယ်သူမှစိတ်မကောင်းပါဘူး။ သင်လည်းမလုပ်သင့်ပါ
သင့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကပိုအရေးကြီးလေ၊ သင်စဉ်းစားလေလေဖြစ်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် fapping နှင့်သင် fapping အကြောင်းပိုမိုတွေးလေလေဖြစ်သည်။ အဆိုပါပိုဆိုးအဆိုပါတိုက်တွန်း fap ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမျှများပြားသောပုံမကျခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းမှရပ်တန့်ရန်သင့်အတွက်အရေးမကြီးပါ။ အလွယ်တကူအလုံအလောက်, ဒါလုံးဝကိစ္စမရှိပါဘူး
နေ့တိုင်းပြန်ပို့လိုက်တဲ့လူတွေက ၀ န်ခံချက်အသစ်တစ်ခုတစ်ခုစီနေ့တိုင်းပေါ်နေတယ်။ ဒီဟာကနေဘာမှယူလို့မရဘူး ကျွန်တော်တို့ဟာလူ့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တခြားလူတိုင်းလည်းမသာ။ မင်းကိုမဖိပါနဲ့၊ ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်အပြစ်မလွှတ်ပါနဲ့။ မင်းအမှားလုပ်မိရင်မင်းခွင့်လွှတ်ဖို့လိုတယ် မင်းဘာမှမမှားဘူး
3 ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။
အကယ်၍ သင်သည်ရိုင်းသော hyena ကို ယူ၍ ကြက်ကြော်တစ်လုံးပါသောအခန်းထဲသို့ထည့်ပါကကြက်သားကြော်ကိုစားပါမည်။ ၄ င်း၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုအတွက်ဂရုမစိုက်ပါ။ အဲဒီအရသာရှိတဲ့အဆီတွေကိုပဲလိုချင်တယ်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က hyena အားကြက်မမစားရန်ပြောခဲ့လျှင်၊ မဟုတ်ဘူး! တစ်စုံတစ် ဦး က ၀ င်လာပြီးကြက်သားကိုမတော်တဆဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်၊ မဟုတ်ဘူး! ဒီ hyena ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ကြက်သားကိုကြာရှည်စွာကြဲခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းအလားတူပင်။ သငျသညျစည်းကမ်းပြည့်နေဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချဘယ်တော့မှရမည်ဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်နုတ်ထွက်လိုလျှင်, သင်အခိုငျအမာအရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားရပါမည်။
အတော်လေးနာမည်ကြီးသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်မျောက်တစ်ကောင်သည်အလင်းနှင့်လီဗာပါသောအခန်းတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ အလင်းရောင်တက်လာပြီးမျောက်ကလီဗာကိုဆွဲလိုက်တိုင်းဘလက်ဘယ်ရီဖျော်ရည်သည်၎င်း၏ပါးစပ်ထဲသို့ပြွန်မှဖြန့်သည်။ စနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာပြီးနောက်မျောက်သည်မည်သည့်အခါမျှရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲအလင်းကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ တံခါးဖွင့်ခဲ့ရင်တောင်သူတို့ကကစားဖို့ထွက်သွားတဲ့အခါအခန်းအပြင်ဘက်မှာအသီးရှိရင်တောင်မှအခြားမျောက်တွေနဲ့တောင်ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ စွန့်ပစ်လိုက်သောဖျော်ရည်ကိုရေလောင်းပြီးသို့မဟုတ်လီဗာကိုဆွဲထုတ်သောအခါမဖြည့်ခဲ့လျှင်မျောက်ကိုပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်လိမ့်မည်! အကယ်၍ စက်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သွားပါကမျောက်သည်သူ၏အာရုံပြန်ရလာလိမ့်မည်။ မျောက်သည်သူ၏လီဗာဆွဲအားအပြုအမူကို“ နားမလည်ဟန်” လျှင်ချက်ချင်းပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်.
(၄) Fapping သည်ထပ်မံမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မျှတပါ
“ Pomodoro Technique” သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်သော hack တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားစေရန် ၂၅ မိနစ်လျှင် ၅ မိနစ်အားလပ်ချိန်ပေးသည်။ သူအာရုံပြံ့လှငျ့အခါတိုင်း။ “ ငါပြီးရင်ငါလုပ်မယ်” လို့တွေးတာထက်အများကြီးပိုလွယ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဘယ်တော့လုပ်မှာလဲဆိုတာဘယ်သူသိတာလဲ။ ထပ်ခါထပ်ခါသူသည်မိမိကိုမိမိတစ်မိနစ်လျှင်မြန်မြန်စစ်ဆေးပြီးနောက်မှအလုပ်လုပ်မည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောလိမ့်မည်။ ထိုအခါမိနစ်နာရီသို့လှည့်။ အနှစ်သာရမှာတော့သူကသူ့ကိုယ်သူအတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ် မဟုတ် ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အလုပ်လုပ်။
“ Cheat Days” သည်အစားအစာအစီအစဉ်များတွင်ရက်များကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Dieter သည်သူတို့မစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်သူတို့လိုချင်သောအမှိုက်များကိုအလိုလိုက်နိုင်သည်။ သူတို့တစ်တွေတမ်းတနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာ cheat day အထိစောင့်နေဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်, သင် ပြောကျသှား အလေးချိန်အားဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း junk အစားအစာကိုစားရန်။
အချိန်နှင့်အချိန်ပြန်အကျိုးကိုရုံထောင့်တစ်ဝှမ်းလျှင်လူတွေခံရဖို့ပိုလိုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသက်သေပြနေသည်။ 90 ရက်ပေါင်း PMO ရှောင်ရှည်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အလိုရှိသမျှကိုလုပ်ဖို့ရက်ပေါင်းအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူတစ်ခုလုံး3လကြာခုခံနှိုင်းယှဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်စေပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုမကြာခဏမရိုက်သေးဘူးဆိုရင်မင်းအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
5. fapping ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းက
ဒီမှာရိုးသားကြပါစို့ fapping ကိုရပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ သငျသညျ fap မှကိုချစ်။ မင်းကမင်းရဲ့ဘဝမှာ fapping ဟာတခြားအရာတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေလို့ပါ။ သင်၏အလေ့အထကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲသင်၏အခြေအနေကိုကူညီရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများရှိပါသည်။ သူတို့ကိုသာကြည့်လိုက်ပါ။
TL; DR အစစ်အမှန်ရယူပါ။